HA GUURSAN NIN KASTA: Guurso Nin Kuu Arka Mustaqbalkiisa - Talo Ku socto Gabar Kasta
Aayaha editorJuly 22, 2019
Tani adiga ayay kugu soctaa — haweeneyda qalbigeeda la jabiyay boqolaal jeer.
I aamin – waan ogahay sida dareenkaagu yahay. Waan ogahay inaad wali isku dayeyso inaad iska tirtirto dhaawacyadii uu kaaga tagay. Waxaad wali isku dayeysaa inaad iska tirtirto xasuusihii uu uga tagay qalbigaaga.
Waan ogahay inaad wali rajeyneyso in waqtiga uu dhaqsi kaa tirtiri doono dhaawac kasta uu u geystay naftaada.
Waan ogahay wali waadka fekertaa. Waxaad ku riyootaa isaga. Wali waxaad isku daydaa inaad ogaato haddii wixii dhacay dhan ay ahaayeen qaladaadkaaga ama kiisa.
Wali waxaad la yaabantahay sababta uu kuugu arki waaye mustaqbalkiisa, sababta uu kuu jeclaan waayay, sababta aad u noqotay qofka uu qalbigeeda jabsaday, sababta aad ugu fiicnaan weysay. Kumanaan sababood ayaa ku wareegaya madaxaaga. Boqolaal su’aalood ayaa ayaa habeenkii oo dhan kusoo jeediyay.
Balse, ii ogoloow inaan kuu sheego xaqiiqda; marnaba isaga kuuma arkin mustaqbalkiisa. Marnaba uma muuqan isagoo ku dhinac taagan adiga. Sabab?
Maya, sababtu ma ahayn inaadan ku wanaagsaneyn isaga, qurux ahaan iyo caqli ahaan balse waxay ahayd inuusan u qalmin jacaylkaaga. Uma qalmin dareenkaaga.
Uma qalmin kalsoonidaada, dulqaadkaaga, gacaltooyadaada, naxariistaada, naftaada damqashada leh iyo dadaalkaaga.
Hadaba intaad naftaada jahwareeri lahayd isla markaana aad dib usoo nooleyn lahayd xasuusaha qof aanan u qalmin jacaylkaaga, tani hakuu noqoto cashar qiimo leh. Tani haku barto inaadan guursan nin kasta balse aad sugtaa ninka kuu arka mustaqbalkiisa.
Nin kasta ha guursan – guurso kan maalin kasta ku doorta. Kan ku dadaala inuu kaa dhoollacadeysiiyo ama wajigaaga ay ka muuqato farxad. Kan dareema farxadda ugu weyn markaad faraxsantahay. Kan aanan ka labalabeyneyn inuu tanaasul sameeyo isla markaana uu huro baahiyihiisa isla markaana raba farxaddaada. Qof ku faraxsan inuu dhinacaaga kasoo tooso.
Ha guursan nin kasta — guurso nin kuu jecel si daacad ah, kalsooni leh. Qotto dheer. Si buuxda. Si naxariis leh. Si shuruud la’aan ah.
Ninka kugu ilaaliya ama kugu haaya qalbigiisa dhib malahan halka uu joogo iyo waxa uu sameynayo. Nin isha kugu haayo. Nin aad uga dhigantahay dunida.
Ha guursan nin kasta — guurso ninka ku ogolaada isla markaana kugu qadariya sida aad tahay. Nin yaqaan dhammaan caadooyinkaaga xun, dhinacaad ka nugushahay balse sidoo kale og in daciifnimadaada iyo cilladahaaga aysan qeexeyn shaqsiga aad tahay. Wuxuu ogyahay in waxyaabahaas ay yihiin qeyb yar oo adiga kaamid ah.
Ha guursan nin kasta – guurso ninka aanan dhib kaaga tagin. Kan aanan kaa cararin marka ay dhibaatooyinka ugu horeeya soo wajahaan xiriirka. Ninka aanan ka cabsaneyn inuu kaala shaqeeyo dhibaatooyinka soo food saaray guurka ama xiriirka. Nin diyaar u ah inuu xiriirka ku maalgeliyo waqti iyo tamar intaba.
Nin kasta ha guursan — guurso nin raba inaad waligiin isla noolaataan. Nin aanan ka cabsaneyn inuu dhib walba kuu maro si uu waligiis kuu ilaashado. Kan neceb ka baqa inuu ku waayo.
Ha guursan nin kasta – Guurso nin ku faraxsan inta noloshiisa ka dhiman inuu kula qaato. Nin doonaya inuu dhinacaaga ku hurdo kana soo kaco dhinacaaga inta uu noolyahay. Kan jecel la joogaaga. Ninka jecel taabashadaada. Kan jecel diirimaadka bushimahaaga iyo shiirkaaga.
Nin hadda, berri iyo waligiis ku raba.